प्रचण्डको चेतावनीपछि मधेसमा भुकम्प ! — Motivatenews.Com
प्रचण्डको चेतावनीपछि मधेसमा भुकम्प !
काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिब्यत्तिले प्रदेश २ को राजनैतिक बृतमा भुकम्प गएको छ ।
ललितपुरको खुमलटारमा पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रदेश २ मा नेकपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएको नाताले सरकार पनि नेकपाले नै बनाउनुपर्ने बताउँदै अहिलेको सरकार ढालीदिने चेतावनी दिएपछि राजनीतिक बृत तरंगीत भएको हो । । उनले प्रदेश २ मा बेथिति र अराजकता मौलाएको बताउँदै यसबाट बचाउन पनि नेकपाले सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेश २ को विकासका लागि नेकपाले अब नेतृत्व लिने उनको भनाइ थियो । ‘प्रदेश २ मा हाम्रो पार्टी नेकपा सबैभन्दा ठूलो पार्टी हो’, उनले भने, ‘प्रदेश २ को सरकार र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । अब सरकारको नेतृत्व नेकपाले लिन्छ ।’
प्रदेश दुईमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)ले संयुक्त रुपमा सरकार बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री संघीय फोरमका नेता लालबाबु राउत रहेका छन् ।
प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले संघीय फोरमको नेतृत्वमा रहेको प्रदेश २ को सरकार ढल्ने खतरण बढेर गएको छ । पछिल्लो पटक मन्त्रीहरूले बजेट आफ्ना नातेदारहरूलाई नामै तोकेर दिएपछि विवाद र आलोचना हुँदै आएको थियो ।
केन्द्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा संघीय फोरम कम्युनिस्ट सरकारमा सहभागी भएको छ । प्रदेश २ को समीकरणका बारेमा भने प्रचण्डले केही भनेका छैनन् । प्रदेश २ मा नेकपा एक्लैले सरकार बनाउन सक्दैन । सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, संघीय फोरम वा राजपा नेपालको समर्थन आवश्यक पर्छ । कांग्रेसले सरकारमा नजाने यसअघि नै जनाइसकेको छ ।
२०७६ बैशाख १७ गते प्रकाशित